Nezvedu - Maanshan Jo Ee Kunze & Export Kutengesa Co, Ltd.
PP rakarukwa Bhegi
Yangu kambani inovaka mu200.Professional yakagadzirwa, FIBC bhegi, hombodo hombe，Jumbo bhegi uye PP rakarukwa bhegi kwemakore gumi nematatu.Tinoshandisa mhando yepamusoro petrochemical polypropylene uye polyethylene sezvinhu zvakasvibirira.Tine denderedzwa rakarukwa 120 mayunitsi uye tine matanhatu ekugadzira mitsara ine epamberi-yekumhanyisa brashi, PE yekunamatira waya 2 yekugadzira mitsara. Zvakanakisa manejimendi timu.，Jumbo bhegi, FIBC bhegi uye PP rakarukwa bhegi reJapan, South Korea, Arabia, Jordan, Brazil, Mexico, Canada, United States nedzimwe nyika.
Yekumhanyisa waya waya kudhirowa Pe yakavharwa waya
Denderedzwa – Aya maitiro ebhegi anogadzirwa pachirukiso seyiputi uye ndiyo yakaderera mwero weFIBC. Iyo haizochengetedze chimiro chayo kana yakatakurwa uye ichagara pasi uye kubuda kunze pakati. Inenge yakafanana nemadomasi kana yatakurwa, sezvo chigadzirwa chichatambanudza jira kana rikaiswa pakamanikidzwa kwechigadzirwa chiri kutakurwa.
U-Panel – Bhegi reU-pani inhanho inokwira ichibva muhombodo yakatenderera, sezvo ichange iine zvidimbu zviviri zvemachira akafanana neU mamiriro ayo akasonerwa pamwechete kuita chimiro chehombodo. Ichachengetedza chimiro chayo chakaenzana zvakanyanya kupfuura setenderedzwa dhizaini.
Chechina-Panel – Iyo ina-pani bhegi ndiyo yakanakisa bhegi yekugara mativi mamwe kunze kwekusanzwisisika bhegi. Yakagadzirwa nezvidimbu zvina zvejira izvo zvinoumba mativi uye imwe yepasi. Izvi zvese zvakasonerwa pamwechete zvinopesana nekutambanudza tendero.
Baffle – Maitiro aya anozove akanyanya pakuchengetedza cube chimiro chechigadzirwa chako kana bhegi rikatakurwa. Iine mamwe mabhaffles akasonerwa pasi pakona yega yega kuita sehomwe yekuzadza kona yega yega. Uye zvakare, kune mamwe homwe dzakasonerwa padivi rega kuti chigadzirwa chese chiungane kutenderedza mabhaffles nehomwe. Izvi zvakakwana kana iwe uine diki dhayamita chigadzirwa senge soya iyo inogona kuyerera kuburikidza nemabhaffles isina kusungirirwa. Aya mabhegi akawandisa anozove nyore kurongedza sezvo ivo vachizogadzira yakanaka mraba kiyubu.